Uboya → Izimpahla zokuphromotha • Imfekethiso yekhompyutha ye-P & M
Inyama yisambatho esithandwa kakhulu esivame ukuphathwa njengento engapheli umsebenzi noma izingubo zokukhangisa, ukuvumela inkululeko enkulu kakhulu yokuhamba kunejazi, ngenkathi kuvikela izingubo zangasese zomsebenzi.
Uboya bungumkhiqizo omuhle wokufekethiswa kwekhompyutha
Yilezi zinzuzo ezenza uboya bathandwe kakhulu ezimbonini eziningi. Ziyindlela ezikhethwa njalo kubasebenzi, phakathi kokunye, emkhakheni wezokukhiqiza, wokulungiselela izinto zokwakha kanye nezokwakha, kodwa futhi ngezinjongo zangasese njengezingubo ezisebenzayo nezifudumele zezinhlobo ezahlukahlukene zemisebenzi.
Uboya besilisa obungu-Adler 506 obunamathuba okuhlobisa
Ukukhetha okubanzi koboya obutholakalayo isitolo kuza ngopende wombala ocebile.
Ngenxa yalokhu, ungaguqula ukukhetha kwakho okuyihlonza ngemibala yenkampani.
Ngokwengeziwe, ngesakho okuhlala isikhathi eside nenhle, unga-oda ukwenziwa ngoboya ukugqokwa kwamakhompyutha. Sithengisa amamodeli wabesifazane, owesilisa, wezingane nowama-unisex osayizi abahlukahlukene.
Vakashela isitolo sethu online >>
I -nutkin njengokukhetha okuvame kakhulu kwezingubo zomsebenzi
Amabhulukwe enyama atholakalayo ezitolo zethu akhiqizwa yizinkampani ezifana Reis futhi ILeber noHollman.
Sinikeza ukukhethwa okubanzi kwamamodeli ngokuya ngokuthanda komuntu ngamunye - kufakwe uziphu ngokuphelele noma kuhlonyelwe uziphu omfishane entanyeni, noma ngaphandle kwehood.
Amamodeli amaningi afakelwe ikhola yangempela yokuma, evikela ngokumelene nokubanda, ngokwesibonelo uma usebenza ngaphandle noma ezimafrijini (okwesikhashana, esimeni somsebenzi ezimweni zokushisa eziphansi ezingaphansi, sincoma izingubo zezitolo ezibandayo kanye namahhala).
Ama-sweatshti amaningi avela ngokunqunywa kwethu anezinto ezingokomthetho ezifundelwe, ezithokoziswa ikakhulukazi ezimeni zomsebenzi owandisiwe.
Siphinde sinikele Uboya obugqamile ngemibala yokuxwayisa nezinto zokubonisa, ethandwa kakhulu phakathi kwabasebenzi basemgwaqweni, abakhi bezokwakha, zonke izinhlobo zamapulatifomu nezakhiwo zemikhumbi. Amanye ama-sweatshirts anemidwebo okhalweni, angavumeli kuphela ukuguqula i-sweatshirt ngezinhlobo ezahlukahlukene zesibalo, kodwa futhi nezimo zezulu.
Izinkampani eziningi ziyakwazisa ubuntu nobuntu, ikakhulukazi uma abasebenzi bedlala indima emele ukuxhumana nabantu abangaba nosonkontileka kanye namakhasimende.
Indlela yokumaka ngemifekethiso yekhompyutha ezingutsheni
Kungenxa yalesi sizathu ukuthi uboya obuphrintiwe buyinto ethandwa kakhulu yokugqoka yezinhlobo ezahlukahlukene zemicimbi yangaphandle, izikhungo zabamele, izingqungquthela nokuqeqeshwa.
Ngenkathi sakha umnikelo, asizange sikhohlwe omncane. Esitolo sethu uzothola uboya bezingane ngemibala namasayizi ahlukahlukene. Siphinda futhi senze imifekethiso ezingutsheni ezinamalogo ezikole namakilabhu azo.
Gcoba kanye Amahembe okuyimikhiqizo ekhetheke kakhulu yokwenza uqobo umsebenzi nezingubo zokukhangisa.
Sikumema thina isitolo, lapho uzothola khona uhla oluphelele lomsebenzi kanye noboya bezentengiso.
4f uboyauboya besikhangisoI-allegro uboya besifazaneuboya obuhamba phambiliizingubo zoboyauboyauboya besifazanekanye nosayizi woboya besifazaneAmakhanda ezinkampani zabesifazaneUboya besifazane obunekhandauboya bezinganeamabhantshi koboya amantombazaneuboya bezisebenziuboya benkampanisawubona uboyauboya besilisai-allegro yamadodauboya obusebenzayo besilisauboya obuceliweuboya obukhanyayoumenzi woboyauboya bokukhangisauboya obusebenzayouboya bokusebenza u-Allegroubucwebe bomsebenzi obucabangayouboya bokucisha umlilouboya bezempiuboya obufekethisiweuboya obunelogouboya obunophawu lwenkampaniuboya obuphrintiweuboya obunenkampani ephrintiweuboya obushibhile
5 / 5 ( 18 amavoti )
Izingubo zokuvikela (amasethi)
Izibalo kanye neziqongqo zamathangi
Izikibha / ipolo
Caps nezigqoko zokuzivikela
AmaJakethi / ama-Vives
Amabhulukwe / Shorts
Amathawula / okugeza
Izingubo ezibonakala ngokuphezulu
Izicucu zezinyawo zehhala
I-P & M
I-96-200 Rawa Mazowiecka
Ucingo: 509 996 496
P & M. Wonke amalungelo agodliwe 2020
ukwakheka nokuqaliswa: pixelsperfect.pl - Amawebhusayithi wePoznań